ILO HOOSE: Ruushka oo ka war helay qorshe halis ku ah oo uu Maraykanku dhowaan ku dhawaaqayo | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ILO HOOSE: Ruushka oo ka war helay qorshe halis ku ah oo...
ILO HOOSE: Ruushka oo ka war helay qorshe halis ku ah oo uu Maraykanku dhowaan ku dhawaaqayo
(Moscow) 13 Abriil 2022 – Madaxweynaha Maraykanka, Joe Biden, ayaa eegaya in uu abaabulo wershadaha agabka millateriga dalkiisa isagoo sidoo kale soo diraya hub qiimihiisu yahay $750 milyan oo Doollar oo kale oo ka mid ah kaydka hubka Pentagon-ka u gaarka ah oo la siinayo Ukraine, sida ay sheegayaan warbixinno cusub oo soo xiganaya saraakiil aan la magacaabin oo ku sugan Washington.
Tani waxay iminka ka sarreeysaa $1.7 bilyan oo agab ah oo loo diray Kiev kana timid Maraykanka tan iyo markii uu dagaalku bilowday 24-kii Febraayo.
Ilaa hadda gargaarka ciidan ee Maraykanku waxa uu ka kooban yahay inta badan gantaalaha lidka taangiyada ee Javelin iyo hababka kahortagga diyaaradaha ee garabka lagu qaadan karo ee Stinger, sida ay qorayso warbaahinta Ruushku.
Haatan Biden waxa uu isku diyaarinayaa in uu sare u qaado gargaarka si loogu soo daro madaafiic culus iyo habab kale, oo qiimihiisu yahay saddex meelood meel hal bilyan ama wax ka badan.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay, iyadoo soo xiganaysa laba sarkaal oo Maraykan ah, in ku dhawaaqista rasmiga ah ee tillaabadani ay imaan karto maalin ama laba maalin gudahood.
Biden uma baahna ogolaanshaha Koongarayska maadaama uu leeyahay awoodo fulineed gaar ahaan waxa loo yaqaan Presidential Drawdown Authority (PDA), kaas oo u oggolaanaya wareejinta kaydka milliteriga Maraykanka ee hadda jira marka laga jawaabayo xaalad degdeg ah.
Tani waxay ka dhigi doontaa qadarka kaalmada millateriga Maraykanka ee Kiev in ka badan $ 2.4 bilyan tan iyo markii Ruushku u diray ciidamadiisa gudaha Ukraine 24-kii Febraayo, markii lagu daro tirooyinkii uu Aqalka Cadi sida gaarka ah u sheegay todobaadkii hore.
Maraykanka ayaa Ukraine ilaa haatan siiyey 1,400 xabbo oo Stinger ah iyo 5,000 oo Javelin ah, sida ay qortay Financial Times (FT) po xiganaysa Pentagon.
Waa 3 meelmood oo 1 meel kaydka guud ee Maraykanka Javelin-ka iyo rubuc ka mid ah Stinger-ka, sida ay qiyaasayso Rugta Daraasaadka Istaraatijiga ah ee Center for Strategic and International Studies (CSIS), oo ah hay’ad ammaanka derista oo Washington ku sugan.
Previous articleDEG DEG: Is rasaasayn ka dhex socota hay’ad dowladeed magaalada Hargaysa + Sawirro
Next articleMa ogtahay inay jirto arrin uu caalamku aad u hadal hayo balse uu MW Farmaajo afkiisa ka dhowro?! (Indhahaaga ku arag)